Professional 15kva-500kva Vula / Cwaka Indalo Gas Generator Imisela yoMvelisi kunye Factory ngqo | Uthandile
Iyunithi yomvelisi wegesi yendalo ngumatshini wegesi ohambisa umlilo ophenjelelwa yirhasi yexabiso eliphezulu njengegesi yendalo, ngokwesiseko semodeli engabizi mali ingaphezulu, inkqubo yokutshaja kunye nenkqubo yokupholisa ephakathi. Inkqubo yokupholisa yamkela indlela yokwahlula imijikelezo yeqondo lobushushu eliphezulu kunye nelisezantsi. Umjikelo wobushushu obuphezulu uyapholisa isilinda, umzimba, intloko yesilinda kunye nezinye izinto ezinobushushu obuphezulu, kwaye umjikelo wobushushu obuphantsi upholisa igesi, umoya kunye neoyile epholileyo emva kokutsha kakhulu.
Irhasi, ioyile kunye nesipholisi:
Ngaphambi kokusetyenziswa kweinjini yendalo yejenjini yendalo, ukucaciswa okufanelekileyo kwerhasi yendalo, ioyile kunye nesipholisi kufuneka kukhethwe ngokwemeko engqongileyo kunye neemeko zokusetyenziswa.Ukukhethwa ngokufanelekileyo okanye hayi kunempembelelo enkulu ekusebenzeni nasekusebenzeni kobomi benjini iseti yomvelisi wegesi yendalo.
1.Iimfuneko zokusetyenziswa kwerhasi kwiiseti ezivelisa igesi yendalo:
Amafutha enjini yegesi ubukhulu becala yirhasi yendalo, kodwa inokusebenzisa irhasi enokutsha enje ngegesi yegesi ehambelana nayo, irhasi yepetroleum kunye negesi yemethane. Irhasi esetyenzisiweyo iya kucaciswa ukuba ibe simahla kumanzi asimahla, ioyile ekrwada kunye neoyile elula, enexabiso eliphantsi lekhalori elingaphantsi kwe-31.4 mJ / m3, umxholo wesalfure ongekho ngaphezulu kwe-480mg / m3, kunye nomxholo we-hydrogen sulfide engekho ngaphezulu kwe-20mg / m3 Ukongeza, uxinzelelo lothutho lwegesi ngaphakathi kuluhlu lwe-MAP ye0.08-0.30.
2.oyili esetyenziswe kumatshini wokuvelisa igesi yendalo
Ioyile isetyenziselwa ukuthambisa iindawo ezihamba ngenjini yegesi yendalo kunye nokupholisa nokuchitha ubushushu, ukususa ukungcola nokukhusela umhlwa kwezi ndawo zihambayo. Umgangatho wayo awuchaphazeli kuphela ukusebenza kunye nobomi benkonzo yeinjini yegesi, kodwa ikwachaphazela ubomi benkonzo yeoyile, ke, ioyile efanelekileyo kufuneka ikhethwe ngokobushushu bendawo yokusebenza yeinjini yegesi yomvelisi wegesi yendalo. iinjini zerhasi yendalo, i-15W40CD okanye i-15W40CC, njl njl zisetyenziswa kangangoko kunokwenzeka
Abavelisi begesi bendalo basebenzisa isipholisi
Isipholisi esisetyenziselwa ukupholisa ngokuthe ngqo kwiinjini zenkqubo zokupholisa zihlala zisebenzisa amanzi acocekileyo acocekileyo, amanzi emvula okanye acacise amanzi omlambo. Xa injini yegesi yendalo isetyenziswa phantsi kwemeko-bume engaphantsi kwesi-0 isidanga, kufuneka ithintele ngokungqongqo isipholisi sikhenkce Ingasetyenziselwa ngokweqondo lobushushu bendawo yokubanda efanelekileyo ye-antifreeze okanye ekuqaleni ngaphambi kokugcwalisa amanzi ashushu, kodwa kufanele kube nje emva kokumisa kwamanzi.
Egqithileyo Ukususwa / ukuhanjiswa kwetreyini Uhlobo lweDiesel Generator Set
Okulandelayo: Ukusasazeka kweNkunkuma yaManzi oLwandle
Umzekelo Inkulumbuso Rhoqo Indlela yokupholisa Ukungenisa umoya Injini yeModeli Injini yohlobo
YDNG-12Y 12 15 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YD4M1D (480) YANGDONG
YDNG-20Y 20 25 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YD4M3D (480)
YDNG-15Y 15 18.75 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YD4B-1 (490)
YDNG-30Y 30 37.5 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YD4B3D (490)
YDNG-30Y 30 37.5 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YD4102D
YDNG-30L 30 37.5 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YDN1004 UTHANDO
YDNG-40L 40 50 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YDN1006
YDNG-50L 50 62.5 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YDN1006
YDNG-60L 60 75 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YDN1006ZD
YDNG-80L 80 100 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YDN1006ZD
YDNG-80W 80 100 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YDN615D ISITAYELA
YDNG-100W 100 125 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YDN615AZLD
YDNG-120W 120 150 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YDN615AZLD
YDNG-100W 100 125 50/60 Ukupholisa amanzi Umnqweno wendalo YDN618D
YDNG-150W 150 Ngo-187.5 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YDN618AZLD
YDNG-200W 200 250 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YDN618AZLD
YDNG-250W 250 312.5 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi YDNWP13
YDNV-150 150 Ngo-187.5 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi V6 VMAN
YDNV-200 200 250 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi V8
YDNV-300 300 375 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi V12
YDNV-400 400 500 50/60 Ukupholisa amanzi ukupholisa phakathi V16
Inqanaba lokubonelela: Injini yegesi yendalo (iyunithi enetanki lamanzi), i-Alternator, isiseko, imodyuli yokulawula, inkqubo yokutshaya, inkqubo yolawulo lwegesi, uxinzelelo lokulawula ivalve, ukubamba ilangatye, igeji yoxinzelelo, i-muffler kunye nebhokisi yezixhobo ezingahleliwe.
1, Irhasi ayiqulathanga manzi asimahla okanye ezinye izinto zasimahla (ubungakanani bokungcola buya kuba ngaphantsi kwe-5 m).
Umxholo weMethane awukho ngaphantsi kwama-95%, ixabiso legesi elingaphantsi kwe-biogas alikho ngaphantsi kwama-550 / 600kcal / m³, ixabiso legesi yendalo ≥850 / 600kcal / m³, ukuba usebenzisa i-calorific low value gas value calorific value <850 / 600kcal / m³） ， amandla eyunithi yehle kancinci.
Umxholo we-3, Hydrogen sulphide kwigesi <200mg / m³, umxholo wesalfure ogqithileyo ufuna isulfurization.
Uxinzelelo lwe-inlet yegesi 3-100KPa ； I-fan ye-booster ifuneka ngaphantsi kwe-，, kwaye i-valve yokunceda iyafuneka ngaphezulu kwe-100Kpa
Iwaranti yonyaka emi-5、1 okanye iiyure ezingama-150/600 zomsebenzi oqhelekileyo, nokuba yeyiphi na eza kuqala
Ukusetyenziswa kwegesi:: 0.33 m3 / KWH yerhasi yendalo